जनप्रतिनिधिले अधिकार प्रयोग गर्न नसके संघीयता फेल हुन्छ - Karobar National Economic Daily
जनप्रतिनिधिले अधिकार प्रयोग गर्न नसके संघीयता फेल हुन्छ
query_builderJuly 25, 2017 10:06 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1328
प्रा. डा. गोविन्द नेपाल आर्थिक विश्लेषक तस्बिर : सुनिल प्रधान
स्वायत्त शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहलाई कुल बजेटको २ खर्ब २५ अर्ब ५ करोड ४५ लाख ९१ हजार अर्थात् १७.६ प्रतिशत बजेट हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट विनियोजन विधेयक पास भइसकेपछि सरकारले साउनको पहिलो दिन नै स्थानीय तहमा एकतिहाइ बजेट पठाइसकेकोे छ भने बजेट कार्यान्वयन गर्न ४५ बुँदे मार्गदर्शन पनि पठाएको छ । यद्यपि संघीय संरचनाअनुसार बनेका ७ सय ४४ स्थानीय तहमा पठाउने भनी घोषणा गरेको बजेट कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको छ ।
स्थानीय शासन ऐनको मस्यौदा संसद्बाट पास नभएको र सूत्रात्मक रूपमा बजेट बाँडफाँडका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन गरेर काम गर्नुपर्नेमा त्योसमेत हुन नसकेकाले कार्यान्वयनमा अन्योल देखिएको हो ।
स्थानीय तहको विभागीय मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले हालका स्थानीय तहले गर्नुपर्ने सबैजसो कानुन बनाउँदै आए पनि जनप्रतिनिधिले कुन–कुन काम के–कसरी गर्ने भन्ने गाँठो फुकाउन नसक्दा पनि बजेट कार्यान्वयन अन्योलमा देखिएको अर्थविद् प्रा. डा. गोविन्द नेपाल बताउँछन् ।
स्थानीय तह अलमलमा पर्दा सिंगो राज्यको अर्थतन्त्रमा असर पर्ने र यही अवस्था रहे ७.२ को आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको बुझाइ छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा दुई दशकदेखि अर्थशास्त्रमा प्राध्यापन गरिरहेका डा. नेपालले जलस्रोतमा विद्यावारिधि गरेका छन् ।
योजना आयोगका पूर्वसदस्य तथा अर्थ मन्त्रालयका पूर्व आर्थिक सल्लाहकारसमेत भइसकेका उनी योजनाविद्का रूपमा पनि चिनिन्छन् । उनै नेपालसँग बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अलमलसँगै समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रबारे कारोबारकर्मी निरु अर्यालले गरेको कुराकानी :
बजेट पास भएको यतिका दिन भइसक्यो । तर, जनप्रतिनिधिहरू कसरी काम गर्ने भन्नेमै अलमलमा छन् । यहाँले कहाँनेर समस्या देख्नुभएको छ ?
सरकारले पहिलो पटक ल्याएको संघीय बजेटमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहका लागि छुट्ट्याइसकेको छ । संसद्बाट विनियोजन विधेयक पास भइसकेपछि पहिलो किस्ताको रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ भने अरू दुई किस्ता मंसिर १ र चैत १ मा पठाउने भनेको छ ।
पहिलो पटक यो व्यवस्था लागू भएकाले स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना बनिनसकेको र बजेटको कार्यान्वयनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा नभएकाले समस्या देखिएको छ ।
यो अलमलले चालू आर्थिक वर्षको विकासलाई कहाँ पुर्याउला ?
चालू आवको विकासलाई संक्रमण विद्यमान छ । मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको कुरा के हो भने जबसम्म पर्याप्त ऐन–कानुन निर्माण गरिँदैन, ती प्रावधानको पालना गर्ने क्षमताको विकास गरिँदैन र सँगसँगै आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था गरिँदैन तबसम्म कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन ।
हुन त २ खर्ब २५ अर्बको बजेट छुट्ट्याइएको छ । केन्द्रले गर्ने निश्चित साइजभन्दा माथिका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा जाने हो । त्यसको कार्यान्वयनमा आज पनि अनिश्चितता छ । यही अवस्था कायम रह्यो भने चालू आवको विकास खर्चमा सुधार हुन सक्दैन ।
यसमा राजनीतिक दल भनौं, सरकार भनौं या जनप्रतिनिधिले के–के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला ?
पहिलो कुरा त स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन तत्काल पास गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, स्थानीय जनप्रनिधिलाई एकदमै घनिभूत रूपमा तालिम दिनुपर्छ । स्थानीय तह भनेको त सरकार हो नि ।
सरकारले थाहा पाउनुपर्ने कतिपय कानुनी कुरा थाहा पाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा कानुनी जनशक्तिको व्यवस्था छैन । कानुनी आधार नभइ, जनशक्ति नभई कुनै पनि निकायले कानुनसम्मत काम गर्न जटिल हुन्छ । उनीहरूलाई नियम–कानुनका बारेमा ज्ञान हुनु जरुरी छ ।
त्यस्तै प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै छ । संक्रमणकालको कारणले गर्दा राज्यले तत्कालका लागि भनेर कतिपय कर्मचारीलाई निर्देशन गर्दागर्दैै पनि कतिपयले जान आनकानी गरिरहेका छन् । कतिपयले संक्रमणकाललाई नबुझेको अवस्था छ ।
स्थानीय तहकै कारण यस पटकको बजेट अपेक्षित खर्च हुन्छ भन्ने एक खालको उत्साह छ नि, खर्च हुने सम्भावना छ कि छैन ?
संक्रमणकालीन अवस्थाले गर्दा कर्मचारीमा एक खालको खिचातानी छ । यो खिचातानीले यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जुन किसिमको उत्साह छ त्यो उत्साहअनुसार काम सक्ने अवस्था छैन । यो समस्याको पूरै निवारण गर्न तत्काल गा¥हो होला, तर यसलाई न्यूनीकरणचाहिँ गर्न सकिन्छ ।
यसका लागि सरकारले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, त्यसैले यसलाई पारदर्शितासँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा र विकास–निर्माणको सन्दर्भमा ओरेन्टेसन चाहिन्छ, अर्को कुरा तथ्यांक संकलन गर्ने वैज्ञानिक विधिअनुसार नै ओरन्टेसन दिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले जुन किसिमबाट कार्य सम्पादन हुन्छ त्योचाहिँ एउटा नजिरका रूपमा बस्छ । उहाँहरूको कार्य सम्पादन एउटा नियमपूर्वक होस् र संविधान ऐन–नियम–कानुनअनुसार होस् भन्ने हिसाबले पनि उनीहरूको क्षमता विकासका लागि पर्याप्त ओेरेन्टेसन चाहिन्छ ।
यही अवस्थाले निरन्तरता पायो भने सरकारले चालू आवमा लिएको ७.२ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा होला ?
अत्यन्तै महŒवपूर्ण प्रश्न । किनभने अहिले हामीले चालू आवका लागि ७.२ को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएका छौं । गत वर्ष देखिएको आर्थिक वृद्धिका आधारमा यो तोकिएको हो ।
सरकारको अपेक्षा के थियो भने स्थानीय तहमा गइसकेपछि केन्द्रीय तहमा रहेका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने सुनियो, तर पनि त्यो अपेक्षा संक्रमणकालको प्रभावलाई उपेक्षा गरिएको मलाई लाग्छ ।
जस्तो कि, कृषिकै कुरा गर्दा कतिपय खेतीपाती अझै हुन नसकेको अवस्था छन् । हाम्रो धेरैजसो मौसममा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तै मानवीय प्रयत्नबाट हुने आर्थिक वृद्धिहरू अलिकति सीमित किसिमको छ । स्थानीय तहमै भर पर्ने हो भने त्यो वृद्धि हासिल गर्न कठिन छ ।
चालू आवमा लिएको राजस्वको लक्ष्य बढी महŒवाकांक्षी भयो पनि भनिन्छ नि ?
पछिल्ला दुई–तीन वर्षमा उठेको राजस्वको लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने अर्थात् भूकम्प र नाकबन्दीको वर्ष थियो नि, त्यो वर्ष पनि लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो । गत आवमा पनि राजस्व संकलन बढी देखिएको छ । राजस्व संकलनमा महŒवाकांक्षी भन्नुको पछाडि के हो भने एनसेलले तिरेको पैसाकै कारण राजस्व बढी उठेको देखिएको छ ।
सधैं यस्तो प्रकारको अवसर नहुन पनि सक्छ । अझै पनि करका दायरा फराकिलो बनाएर राजस्व असुलीमा ध्यान दियो भने लक्ष्यअनुरूपको राजस्व आउन सक्छ । किनभने जीडीपीसँग तुलना गर्दा नेपालको राजस्व अलि बढी नै उठेको देखिन्छ ।
हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अन्डरस्टिमेट छ । अलि सानो आकारको छ । जति हुनुपर्ने हो त्यो गणना नभएकाले पनि हुन सक्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जे छ त्योभन्दा अलिकति ठूलो छ । त्यो किसिमको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन हुने हो भने राजस्व वृद्धिदर बढ्दैन ।
सरकार राजस्वमुखी भएको हो भन्दा हुन्छ ?
हो, यो कुरामा म सहमत छु । सरकारको ध्यान राजस्व उठाउने कुरामा बढी केन्द्रित हुने तर खर्च गर्ने कुरामा सरकार केन्द्रित हुन नसकेको देखिन्छ । गत वर्ष बन्द–हड्ताल थिएनन्, बाधा–अड्चनहरू थिएनन्, आयात–निर्यात पनि बढिरहेकै थियो, त्यो अवस्थामा पनि खर्च बढ्न सकेन । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष विकास खर्च ५५/५६ प्रतिशत थियो, अहिले ६६ प्रतिशत मात्र छ ।
सरकारको संशोधित अनुमानको अपेक्षा ८४ प्रतिशत खर्च गर्ने थियो, तर हुन सकेन । यद्यपि ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च बढाउन प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा सारा कुरा भए, तर पनि खर्च भएन । यसले के देखाउँछ त भन्दा हाम्रो संरचनात्मक व्यवस्थामै कमजोरी छ । त्यसैले यो बढ्न सकेन । मानवीय प्रयत्न भनौं या सामान्य प्रयत्न भनौं, त्यसले हुँदैन । हामीले सिस्टम बिगारिसकेका छौं ।
सिस्टम बिगारेकाले नै हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं । जस्तो सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आयोजनाको म्यानेजर परिवर्तन हुने, त्यसमा पनि राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे खोजेर पठाउने र आफ्ना मान्छेले गरेको कामको दण्ड–सजाय गर्न नसक्दा समस्या छ ।
जब तटस्थ माध्यमबाट उपयुक्त मानिसहरू पठाइन्न, गल्ती गर्नेलाई सजाय दिने र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न नसक्ने कमी–कमजोरी हामीसँग छ । यसमा पर्याप्त मात्रामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
खर्च गर्र्न सरकार असफल हुनुका पछाडि अरू के–के कारण छन् जो विकासको बाधक बनिरहेका छन् ?
समयसँग सम्बन्धित कुरा पनि छन् । उदाहरणका लागि असार मसान्तसम्म बजेट पास भइसक्छ । साउन १ देखि नै अख्तियारी जान्छ, तर समस्या साउन–भदौमा वर्षातका कारण काम हुँदैन । त्यसपछि चाडपर्व आउँछ ।
त्यससँगै टेन्डरका प्रक्रियाहरू एकदमै लामा छन् कि तीन महिना पर्खनुपर्ने हुन्छ । तिनलाई समय दिनुपर्ने हुँदा काममा ढिलाइ हुन्छ । अर्को पहाडी र तराई क्षेत्रमा चिसोको समयमा काम हुन्छ, तर हिमाली जिल्लामा काम हुँदैन । मौसमको समस्या छ ।
अर्कातर्फ हाम्रो ध्यान नीति–कानुन मेकानिजम हुँदाहुँदै पनि हामीले कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । अनुगमनको पार्ट फितलो छ । यो सरकारले मात्र गर्ने होइन, राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले जिम्मेवारी लिएर त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय कुरामा नीति–नियम कानुनको अस्पष्टताकै कारण काम हुन सकिरहेको छैन ।
कतिपयले यसरी काम नहुनुका पछाडि राजनीतिलाई दोष दिने गरेका छन् भने कतिपयले कर्मचारी तन्त्रलाई दोष दिने प्रचलन छ । यसमा यहाँ के भन्नुहुन्छ ?
मेरो विचारमा यो राजनीति र कर्मचारी तन्त्रलाई तुलना गर्न मिल्दैन । हुन त यी दुवैबीच अन्तरसम्बन्ध त हुन्छ नै । हरेक कुरालाई मूल रूपमा हाँक्ने राजनीति नै हो । राजनीति देशको मूल नीति हो । यदि राजनीतिमा रहेका मान्छेमा इच्छाशक्ति छ भने त्यो गर्न सहज हुन्छ ।
कतिपय मन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालय हाँकेर उदाहरण प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सिस्टम नीति–नियम उही उहाँहँुदै पनि कतिपय मन्त्रीले एक्ट्रा अर्डिनरी देखाएका छन् । अर्को कुरा, राजनीतिले ड्राइभ ग¥यो भने कर्मचारीले काम गर्न सक्छन्, सक्षम पनि छन् ।
अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने र आफ्नो स्वार्थका लागि मात्रै राजनीतिज्ञहरूले काम गर्दा त्यहाँ समस्या आउँछ । ब्युरोक्रेसीबाट नाजायज फाइदा लिने गरी पोलिटिक्स गरिन्छ भने ब्युरोक्रेसीले टेर्दैन । समस्या यहींनेर हो ।
उसो भए नेपालको ब्युरोक्रेसी नै विकासको बाधक हो भन्ने कुरामा यहाँ सहमत हुनुहुन्न ?
बाधक हो भन्ने पक्षमा म छैन, तर ब्युरोक्रेसी विकासमैत्री छ म भन्दिनँ । अहिलेको ब्युरोक्रेसी सकभर आलटाल गर्ने, निर्णयमा ढिलाइ गर्ने र आफूचाहिँ निर्णय नगरेरै सेफ हुने पक्षमा देखिन्छ ।
ऊ धेरै विवादमा पर्न चाहन्नँ, त्यो यथार्थ हो । तर, यही ब्युरोक्रेसीलाई सरकारले भनौं, राजनीतिक दलले चाहन्छ भने काम गर्छ र सक्षम पनि छ । ब्युरोक्रेसीलाई दोष दिनु राजनीतिक दलको आफ्नै नालायकीपन हो ।
ब्युरोक्रेसीलाई राजनीतिले ड्राइभ गरिरहेको छ । ब्युरोक्रेसी स्वयं ड्राइभ हुने अवस्था छैन, सिस्टम बिग्रिसकेको छ । अरू देशमा ब्युरोक्रेसीले मुलकलाई ड्राइभ गरिररहेको हुन्छ । ती देशमा राजनीतिक नेतृत्व जो आए पनि खास फरक पर्दैन । तर, हामीकहाँ सबै कुरा राजनीतिक नेतृत्वले काम गरिरहेको छ ।
तपार्इंले यसो भनिरहँदा स्थानीय तहमा निर्वाचनपछि नै जनप्रतिनिधि चुनिएर आएका छन्, तर जनप्रतिनिधिले काम गर्न सकेनन् नि ?
हो, समस्या त छ तर अधिकार धेरैलाई थाहा छैन । अहिलेसम्म माथिको आदेश मान्दै काम गरेको भएकाले पनि हुन सक्छ । अर्को कुरा, अधिकार नबुझेर पनि हुन सक्छ । यो अवस्थामा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई गाइड गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
यो अवस्थामा कतै मन्त्रालयलाई पनि सधैं गाइड गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने अभिलाषा प्रकट भएर भोलि केन्द्रले नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने खतरा एकातिर छ भने दोस्रो स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि केन्द्रमै निर्भर रहने हुन् कि भन्ने अर्को खतरा छ । यदि त्यसो हो भने यो गलत हुन्छ ।
किनभने उनीहरूले आफ्नो अधिकारका बारेमा जानकारी पनि लिनुप¥यो, त्यो अधिकार लिन क्षमता पनि हासिल गर्नुप¥यो, उचित हिसाबबाट अधिकार प्रयोग गर्न जान्नुप¥यो । केन्द्रले पनि अधिकार लिन सिकाउनुप¥यो । अधिकार पाइयो भन्दैमा नगर परिषद्हरूले अहिले नै पहिलो साधारणसभाबाटै करका दरहरू परिवर्तन गरेका छन् नि, यी कुरा अहिल्यै गर्नुपर्ने अवस्था होइन भन्छु म ।
उनीहरूसँग पाँच वर्षको समय छ । अर्थतन्त्र कसरी परिचालन हुन्छ त्यसको सकारात्मक भनौं या नकारात्मक प्रभाव के हुन्छ, कति ट्याक्समा परिवर्तन गर्दा उचित हुन्छ, यी संवेदनशील अवस्था हुन् । अधिकार छ भन्दैमा त्यसबारे अपरिपक्व हिसाबले हतारमा निर्णय गर्नु राम्रो होइन । त्यसले नकारात्मक प्रतिफल दिन्छ, जस्तो अहिले निजी क्षेत्रले नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन लागेका छन् । असक्षम भन्ने बेला भएको छैन ।
उसो भए भनिदिनुस् न, जनप्रतिनिधिले अधिकार लिन सकेनन् या केन्द्रले अधिकार दिन सकेन भने के हुन्छ ?
भर्खर निर्वाचित भएर आएकाले जनप्रतिनिधिहरू नियम–कानुनबारे अभ्यस्त भइसकेको अवस्था छैन । कतिपयले संविधान नै पढेका छैनन् होला, कतिपय जबरजस्ती निर्वाचनमा होमिएर निर्वाचित भएर आएका छन् ।
निर्वाचित भइसकेपछि उनीहरूले जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो, आफ्नो अधिकार–कर्तव्यबारे जानकार हुनुपर्ने हो त्यो देखिएको छैन । यसका पछाडि थुप्रै कारण छन्, तर सरकारले पनि जनप्रतिनिधिलाई अधिकार र कर्तव्यबारे ओरेन्टेसन आवश्यक छ ।
उहाँहरूले लिन सक्नुपर्छ र हामी सबैले जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ । हामी सबैले जनप्रतिनधिमा अधिकार प्रयोग होस् भन्ने चाहनुपर्छ र सहयोग गर्नु पनि पर्छ । जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेनन् भने हाम्रो होल संघीयताले फेल खान्छ ।
हाम्रो संघीयताको मोडल भनेको स्थानीय तह पनि एउटा सरकार हो । संविधानले तीनवटा सरकारको परिकल्पना गरेको छ । यसलाई सरकारको अनुभूति दिन, सरकारको काम गर्ने अधिकारको काम गर्न हामीले मद्दत गर्नुपर्छ ।
यहाँले संघीयताको कुरा गर्नुभयो । संघीयता महँगो हो भनिन्छ । तपाईंहरूले यस विषयमा अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो । हामीसँग भएको स्रोतसाधनले हाम्रो संघीयताको भार थेग्न सक्छ ?
हो, हामीले एउटा अध्ययन गरेका थियौं । अध्ययन गर्दा संघीयता महँगो देखिएको थियो । किनभने संघीयता लागू भइसकेपछि तीन तहमा सरकार बन्छ । पहिले एउटा सरकार थियो । त्यसका खर्चहरू व्यापक मात्रामा हुने नै भए ।
सामान्य रूपमा हेर्दा पनि महँगो नै देखियो । यदि जनप्रतिनिधिहरूले राम्रो काम गर्न सके भने, विकास–निर्माणका क्रियाकलापहरू एकदमै फस्टाएर गए, नयाँ–नयाँ उत्पादनका क्षेत्रहरू पहिचान हुँदै गए, नयाँ–नयाँ सेवाका क्षेत्रहरू पहिचान हुँदै गए र त्यहाँका जनता आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुँदै गए भने त्यसले हाम्रो आम्दानी व्यवस्थापन गर्न सक्छ । त्यसले थेग्न सक्छ ।
हिजोकै स्रोत र साधनमा सीमित भयौं, त्यही केन्द्रबाटै आएका स्रोतहरूमा निर्भर हुन खोज्यांै भने यो थेग्न सकिँदैन । यो एउटा परीक्षणको कुरा हो । सात प्रदेश थाम्न सकेनौं भने मर्जर हुन सक्ने, गाभिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
यदि आवश्यक भएमा प्रदेशहरू बढ्न सक्ने कुरा पनि छ । यो प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा पहिचानका कुरामा ज्यादै छलफल भए, तर त्योसम्बन्धी बहस नै भएनन् । आर्थिक रूपमा सक्षम छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा हेरेनौं ।
त्यसैले पुरानै स्रोतमा अलमलिएर बस्यांै भने त्यो थेग्न सक्ने कुरै भएन । नयाँ सम्भावनाका आधारहरू तय गरेर अघि बढ्यौं भने, काम गर्न सक्यौं भने थेग्न सक्छ, त्यो सम्भावना छ ।
योसँगै राजस्वको बाँडफाँडमा पनि समस्या छ भनिन्छ, यहाँले के देख्नुभएको छ ?
हो, यहाँनेर समस्या छ र मैले प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगको विषयमा विमति जनाउँदै आएको छु, किनभने प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोग दुवैलाई एउटै मातहतमा राखेको छ, दुइवटै आयोग गठन गरिनुपर्छ । त्यहाँ बोर्डमा जम्मा पाँच जना नियुक्त गर्ने भनिएको छ ।
त्यसमा पनि स्नातक पास भएका व्यक्तिलाई राख्ने भनिएको छ । हाम्रो सत्ताधारीको सोच राम्रो नभई हाम्रो मान्छे लाने प्रचलन छ त्यसले स्रोतसाधनको विभेद पूर्ण तरिकाले काम गर्न सक्दैन । त्यो क्षमता पाँच जनाको टिमले राख्न सक्दैन ।
धेरै आयोग विवादस्पद छन्, जहाँ एउटा फोरम बन्नुपथ्र्यो, स्थानीय प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा केन्द्रीय मन्त्रीहरूको संलग्नता हुनुपर्ने थियो । त्यसो गरिएन । यसले झन् ठूलो समस्या पर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्र संघीयता कुल गार्हस्थ्य उत्पादन जनप्रतिनिधि